သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ကျွန်ုပ်နှင့် ကျား/မ ကိစ္စ ပုံပြင်များ
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 03:03
သဂျီး နော် သဂျီး အမြန်တင် ဖတ်ကောင်းမှ .. ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ ထုထဲ လိုက်လို့ ... ဟင်း နှစ်လုံးကွဲ သွားမယ် ... (ဖန်ခွက် ဖန်ခွက်)
Tuesday,3September 2013 at 05:40:00 BST
အမှု့အပ်ချင်လို့ပါ ... ရွှေစင်ဦး ရဲ့ ဘလော့ဂ်လင့် ကို ပြောင်းချိတ်မထားတဲ့ အတွက် အပေါ်မတက်မှု့ ...ဟား ဟားးးးးးးးးးးးး
Tuesday,3September 2013 at 06:00:00 BST
အဲ့အဖိုး မိဖုရားသက်တော်စောင့်လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်... ဟီး...
၆၀+ ပြောပေမင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသက် ၂၀တိုးပြီး ဖတ်လိုက်တယ်...
အစ်မရွှေစင် အဖော်ရှိလို့ ကော်ပါမန့်လိုက်သေး... ဟေး... :P
60+ဆိုလို့သဂျီးဘလော့ဖတ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူး အောက်မေ့လို့ .အခုတော့ အပေါင်းဖော်တွေနဲ့.....မြန်မြန်တင်ပါ သဂျီးမင်း
Tuesday,3September 2013 at 06:52:00 BST
လုပ်ပြီ သူကြီးတို့ကတော့ ကုန်းကုန်းအကြောင်း...း)
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးထတယ်...ရည်းစားလူလု ဟိုဒင်းကြမ်းညပ်ဆိုတာတောင် အတော်မစားသာတာ အနှီဘိုးတော်လိုများ မြတ်ချွာဖျား...ဖွ ဖွ...း)
သူကြီး ၀ါကျွတ်ဖို့ တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြန်ပြီနော်...လက်ဖွဲ့ကြိုဝယ်ထားရတော့မှာလား...
Tuesday,3September 2013 at 12:06:00 BST
လာလည်သွားပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော်ကတော့ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.photayokeking.org မှ ကိုဖိုးတရုတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘာလောဂ်ကတော့ http://photayokeking.blogspot.com ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.photayokeking.org သို့ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Tuesday,3September 2013 at 14:32:00 BST
တဂျီးမင်း ကတော့ အဲလိုချည်းပဲ။ ကောင်းခန်းရောက်ရင် မီးပျက်သွားရော..။
Wednesday,4September 2013 at 08:23:00 BST
Blog Day မှ စ၍ ... စာပြန်ရေးဖြစ်လာတဲ့ ...
Blogger များ ရဲ့ up-to-date Post များ သို့ ... :)
Wednesday,4September 2013 at 08:40:00 BST
အဟမ်းး အဟမ်းးး အဟမ်းးး
Wednesday,4September 2013 at 16:43:00 BST
comment က ဘယ်ရောက်သွားလဲ မသိဘူး...ဟိ ဟိ
Wednesday,4September 2013 at 18:35:00 BST
၆၀ + မှ ဖတ်ရန် ဆိုလို့မဖတ်ဘဲ နေပါ့မလား တဂျီးမင်းရယ်...ငှဲ..ငှဲ..ငှဲ..
ဆက်ရန် မြန်မြန် တင်ပါဗျို့ ..း)
Wednesday,4September 2013 at 18:52:00 BST
သူကြီး ရက်စက်ချက်ဗျာ ။
မြန်မြန်ရေးပါ သူကြီး ။
Thursday,5September 2013 at 16:24:00 BST
တိန် လုပ်ပြန်ပြီ တန်းလန်း...
တဂျင်းမီး လူဆိုးကြီးးးးးးးးး >.<
Thursday,5September 2013 at 17:39:00 BST
Saturday,7September 2013 at 05:18:00 BST
အောင့်တောင့်တောင့်နဲ့ ဖတ်ဖြစ်သွားရဲ့း)
Saturday,7September 2013 at 11:35:00 BST
အဟား.... ...!!!! အကိုရေ.. မဟုတ်မှ လွဲရော.. လွဲရောနဲ့ .. နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ပါဦးဗျို့ .. :)))
Saturday,7September 2013 at 14:00:00 BST
ဘယ့်နဲ့တော် ၆၀+ တဲ့အေ.......
Saturday,7September 2013 at 22:54:00 BST
"မင်းမို့လို့ ငါ မပြောချင်တာ။ မင်းက အထူးအဆန်းဆို ဘလော့ပေါ်တင်ပြီး မောင်းခတ်နေကျမဟုတ်လား။ မင်းတို့ ခေတ်လူငယ်တွေ အတော်ခက်သားကလား"
အဲ့အဖိုးကြီးက သူဂျီးကို အခုပြောနေတယ်..
"ခက်လိုက်တာကွာ မင်းကလည်း မောင်းခတ်တာတောင် အသေအချာ အတိအကျ အခန်းဆက်နဲ့ ပို့စ်တင်တာလားကွ"
Sunday, 8 September 2013 at 03:32:00 BST
မျက်စိပူ မျက်နှာပူနဲ့ အဆုံးထိ သဘောတကျကျ ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ် သူကြီးမင်းရေ။ နောက်မှ ဆက်ရေးမယ့် အဘိုးနု ပြောပြမယ့် အကြောင်းလေးကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်။ အမြန်ဆုံးရေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။
Sunday, 15 September 2013 at 03:52:00 BST
အော်... သူကြီးမင်းရယ်... အဘိုးပု ပြောလဲပြောချင်စရာ.. ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကုန်အစင်ကို တစ်လောကလုံးကို မသိချင်မှအဆုံး :P သူကြီးမင်းနဲ့ထပ်တူ ပြုံးစိစိနဲ့ဖတ်သွားတယ် အခန်းဆက်လေးလည်းမျှော်နေမယ်း)
Thursday, 19 September 2013 at 14:52:00 BST
ဖတ်လိုက်ကြတာ အရွယ်ကို စုံလို့... :D
Friday, 20 September 2013 at 05:13:00 BST
မိန်းမ ဖတ်လို့ ရေးပါအုံးရှင့် 
Tuesday, 18 February 2014 at 13:09:00 GMT